Koox ka tirsan Al-Shabaab 'oo ku jirta waddo isku xirta labo magaalo oo Kenya ku taalla' - BBC News Somali
Koox ka tirsan Al-Shabaab 'oo ku jirta waddo isku xirta labo magaalo oo Kenya ku taalla'
Lahaanshaha sawirka NATION MEDIA GROUP
Image caption Al-Shabaab ayaa horay u sheegatay weerarro ka dhacay Kenya
Axmed Maxamed Axmed, oo ka mid ah rakaabka ku go'doonsan meel u dhow magaalada Mandheera ayaa laanta Af-Soomaaliga ee BBC-da u sheegay in weerar lagu qaaday gaari ay wax yar ka dambeeyeen.
"Baabuur naga horreeyay oo Land Cruiser ah ayaa dhexda loo galay, waana la xabadeeyay, darawalkii ayaa nasoo wacay oo nagu yidhi: 'waddadu waa khatar', iyagiina way badbaadeen laakiin muraayadihii gaariga ayey xabadda ka burburisay. Annagu xalay waxaan xalay ku hoyanay Ceelwaaq, haddana waxaan taagannahay tuulo la yiraahdo Gaari oo u dhow Mandheera", ayuu yidhi Axmed.
Mar uu ka hadlayay xaaladda shacabka rakaabka ah ayuu yidhi: "Dadka aad bay u rafaadsan yihiin, safar saddex maalmood ah ayey ku jiraan, lugaha ayaa bararay, Alle waxaan ka baryeynaa inuu dhibkan naga fududeeyo".
Gawaarida ka taga Nairobi ee ku wahan Mandheera ayaa ku khasban inay sii maraan Ceelwaaq, maadaama horay cabsi darteed looga go'ay jidkii toos u tagi jiray Mandheera, ka dib markii ay weerarro ka dhaceen.
Xiriir aan la sameynay mas'uuliyiinta laamaha ammaanka ee gobolka ayaan noo suurtagalin.
Cabsida ku aaddan dagaallameyaasha Al-Shabaab ee waddada gala ayaan la fududeysan karin, iyadoo la xasuusto in dhowr sano ka hor ay kooxdan sheegatay mas'uuliyadda weerarro lagu bartilmaameedsaday basaska rakaabka, oo dad farabadan lagu laayay.
Image caption Sawir tusaale u ah weerarkii Baska ee Mandheera
Kooxda Al-Shabaab oo dusha u ridatay mas'uuliyadda weerarkaas ayaa sheegtay inuu arrgoosi u ahaa howlgallo baaxad leh oo ay ciidamada amaanka ee Kenya ka fuliyeen masaajidyo ku yaalla magaalo xeebeedka Mombasa, iyagoo ku ugaarsanayay xubno lagu tuhunsanaa inay xag jir yihiin.
Waxaa ka dambeeyay weerarro kale oo lagu beegsaday macallimiinta aan deegaanka ka soo jeedin, taasoo sababtay in guud ahaanba ay macallimiinta tayada leh ku yaraadaan gobolka Waqooyi bari.